रंगशाला आफ्नो ठाउँमा बनाईदिन धुर्मुसलाई चौतर्फी फोन, यसरी जुट्दै छ सहयोग (भिडियोसहित) - pnpkhabar.com
You are at:Home»भिडियो»रंगशाला आफ्नो ठाउँमा बनाईदिन धुर्मुसलाई चौतर्फी फोन, यसरी जुट्दै छ सहयोग (भिडियोसहित)
रंगशाला आफ्नो ठाउँमा बनाईदिन धुर्मुसलाई चौतर्फी फोन, यसरी जुट्दै छ सहयोग (भिडियोसहित)
By रिता घिसिंग on १७ चैत्र २०७४, शनिबार ११:०९ भिडियो
काठमाडौँ : ४ वटा नमूना वस्ती निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिसकेका हास्य कलाकार तथा सामाजिक अभियन्ता सिताराम कट्टेल धुर्मुसले अब अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट निर्माणमा जुट्ने घोषणा गरेका छन् ।
फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै धुर्मुसले अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणको लागि धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले संयोजन गर्ने खुलाएका छन् । उनका अनुसार चाँडै रंगशाला निर्माण समिति बन्नेछ र त्यही समितिको रोहबरमा रंगाशाला बन्नेछ ।
नेपालले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको मान्यता पाएपछि उनीमाथि क्रिकेट रंगशाला निर्माणको अभियान अघि बढाउन जनस्तरबाट दवाव बढेको थियो । धुर्मुसले लेखेका छन्‘यो परियोजना सरकारर्लाइ सघाउनका लागि निम्ति भएको भन्दै यसमा नेपाल सरकारले गम्भिरतापूर्वक साथ, सहयोग र समन्वय गर्ने विश्वास लिएको छु’ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला नभएको अवस्थामा धुमुर्सलाई आफ्नो गाउँ ठाउँमा बनाईदिन आग्रह समेत गरेका छन् ।
यसको बिषयमा उनलाई फोन आउने गरेको समेत बताए । धुर्मुसले यसअघि नमूना नेपाल नामको अर्को परियोजना घोषणा गरेका थिए । उनले दुवै परियोजना आफूहरुका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै सोधेका छन्, ‘अब भन्नुहोस कुन चाहिँ पहिला ?’ यसको जवाफमा धेरैबाट पहिले क्रिकेट रंगशाला निर्माण हुनुपर्ने प्रतिक्रिया आएको छ ।
३१ बैशाख २०७५, सोमबार ००:४५ 0
नेपाली डुबानमा पर्दा मन दुख्दैन ?
३ चैत्र २०७४, शनिबार ०८:२६ 0
७ कक्षाका बालकको दमदार भाषण, सुनेर रोए दर्शक (हेर्नुहोस भिडियो)
३० भाद्र २०७५, शनिबार ०५:३१ 0
जिन्सको पाइन्ट किन्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्